दीपावली ः दिन र रातलाई जोड्ने पर्व | चितवन पोष्ट दैनिक
दीपावली ः दिन र रातलाई जोड्ने पर्व
२०७० कार्तिक १७, आईतवार ०२:१७ गते
तिहारको समय छ । कार्तिक कृष्णपक्षको त्रयोदशी तिथिदेखि लिएर कार्तिक शुक्लपक्षको द्वितीय तिथिसम्मको पञ्चदिवसीय कार्यक्रमलाई समग्रमा तिहार भनिन्छ । हामी मनुष्य हौँ । हामी सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ प्राणी । आपूmसँगै प्रकृतिका प्रत्येक सिर्जनालाई श्रद्धा गर्नु हाम्रो धर्म हो । हाम्रा पूर्वजहरुभित्र प्रकृतिप्रतिको सम्मान र निष्ठा उच्च थियो । त्यसैले, उनीहरुले ढुङ्गा, माटो, बोटवनस्पति र जीवजनावर सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार हामीलाई सिकाएर गएका छन् ।
तिहार हाम्रा पूर्वजले हामीलाई सिकाएर गएका यस्ता अनेकौँ संस्कारमध्ये एक हो । तिहार धेरै अर्थ र मह¤व बोकेको पर्व हो । पर्यावरणप्रतिको संवेदनशीलता व्यक्त गर्ने पर्वका रुपमा पनि यस पर्वलाई लिइन्छ । संसारमा सम्भवतः यति समृद्ध र उच्च संस्कृति दोस्रो नहुन सक्दछ । मान्छे उसको संवेदनशीलता, कोमलता र दयाजस्ता आन्तरिक गुणहरुका कारण श्रेष्ठ भएको हो । हाम्रा पूर्वजहरु यति संवेदनशील थिए कि उनीहरुले ढुङ्गोजस्तो अति कठोर जडवस्तुभित्र पनि अर्थ देखे र भगवान् माने ।
कतिपयले भन्ने गर्दछन् ः ‘ढुङ्गोजस्तो प्राणहीन र निर्जीव वस्तुलाई पूजा गर्ने संस्कृतिलाई पनि के संस्कृति भन्ने ? यो त चेतना र बुद्धिहीन परम्परा हो ।’ तर यो संवेदनहीनहरुको प्रतिक्रियासिवाय केही होइन । जोसँग संवेदना छ, कोमल भावना छ, उसले बाहेक कसैले पनि ढुङ्गालाई पूजा गर्दैन । आज मानिस–मानिसका बीचमा पनि मानिस एक्लो बाँचेको छ । वरपर दुःख पाएका थुप्रै मानिसहरु छन्, तर तिनका दुःखमा सहानुभूति व्यक्त गर्ने मानिसको अभाव छ । यो मानिसमा संवेदना हराउनुको उदाहरण हो ।
हाम्रा पूर्वजले ढुङ्गाको पनि अर्थ देखे । कीराफट्याङ्ग्राले पनि हामीलाई कुनै न कुनै रुपले सहयोग पु¥याइरहेका हुनाले तिनको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना उनीहरुसँग थियो । तुलसी र वरपीपलजस्ता बोटबिरूवालाई पूजा गर्न सुरू गरेपछि बोटबिरूवालाई जथाभावी विनाश गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित हुन सक्छ भन्ने उनीहरुले बुझेका थिए । तिहारका बेलामा हामीले कुकुर, काग, गाई, गोरू आदिको पूजा गर्दछौँ । यसको अर्थ ‘यी प्राणीहरु कुनै न कुनै रुपले हाम्रा लागि सहयोगी छन् । त्यसैले, यी घृणित होइनन्, पूजनीय छन्’ भन्ने हो ।
कुकुर, काग, गाईजस्ता पशु मनुष्यका लागि मात्र होइन, समग्र प्रकृतिकै अविभाज्य अङ्ग हुन् । पूर्ण प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्नका लागि पनि हामीले हाम्रा वरपर रहेका कीटपतङ्ग, बोटवनस्पति र पशुप्राणीको रक्षा गर्नुपर्दछ भन्नु तिहारमा यिनको पूजा गर्नुको अर्थ हो ।
किन यिनलाई भगवान्को समकक्षमा राखेर पूजा गर्ने गरियो भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर छ । हाम्रो मान्यता के छ भने ईश्वर सर्वत्र छन् । संसारमा यस्तो कुनै वस्तु, व्यक्ति र विषय छैन, जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति नभएको होस् । ईश्वर यदि सर्वत्र छन् भने माटो र ढुङ्गोमा पनि छन् । यदि ईश्वर सर्वत्र छन् भने कुकुर र कागमा पनि छन् । यदि ईश्वर सर्वत्र छन् भने तुलसी र वरपीपलमा पनि छन् । यो पनि हामीले तिहारमा पशुपक्षी र जीवजनावरको पूजा गर्नुको अर्थ हो ।
संसारमा हामीले व्यर्थ भन्न मिल्ने कुनै पनि चीज, विषय र पदार्थ छैनन् । प्रकृतिले अनावश्यक रुपमा विष पनि पैदा गरेको छैन । हामीले हाम्रो आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रकृतिमा भएका वनस्पति र पशुप्राणीबाट सहयोग मिल्ने गर्दछ । तर, हाम्रो आवश्यकता मात्रै सबै आवश्यकता होइन । हामीलाई चाहिँदा सबैलाई चाहिने, तर हामीलाई नचाहिँदा कसैलाई पनि नचाहिने भन्ने हुँदैन । हामीले तिहारमा पशुपक्षीलाई उच्च सम्मानका साथ पूजा गर्ने संस्कृतिले हामीभित्रको भावनात्मक व्यापकताको परिचय दिएको छ ।
हामी कति व्यापक रहेछौँ र हाम्रो संस्कार कति संवेदनशील एवम् करुणाप्रधान रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण हामीले यतिखेर मनाउँदै गरेको तिहार हो ।
तिहारका बेलामा घरभित्र, बाहिर र वरपर गरिने दीपावली हाम्रो अर्को मह¤वपूर्ण उत्सव हो । हामीसँग यदि ज्ञानको धिपधिपे छ भने औँसीको जस्तो दुःख, पीडा र अज्ञानको जतिसुकै सघन अँध्यारो भए पनि त्यो सजिलै हराएर जान्छ । त्यसैले, उज्यालो बालेर भित्र र बाहिरको अँध्यारो हटाउने प्रयास गरौँ भन्नु दीपावलीको विशेष अर्थ हो ।
गङ्गा नदीको किनारमा एक जना सन्त आश्रम बनाएर बसेका थिए । आदर्श आध्यात्मिक जीवनको नेतृत्व गर्नुबाहेक उनले आफ्ना अनुयायीहरुलाई योग, ध्यान र ज्ञानको शिक्षा पनि दिने गर्दथे ।
एक दिन औँसीको दिन थियो । वरपर चौपट्ट अँध्यारो थियो । सन्तले आफ्ना शिष्यमध्ये एक जनालाई बोलाएर आफ्नो हातमा रहेको किताब दिँदै भने— ‘बाबु, यो किताब भित्र कोठामा लगेर टेबुलमाथि राख ।’
शिष्य भित्र गुरूले दिनुभएको पुस्तक लिएर भित्र कोठामा गयो र आत्तिँदै फर्किएर आयो । ऊ डरले असिनपसिन देखिन्थ्यो । डराउँदै उसले भन्यो— ‘गुरूदेव, भित्र टेबुलनजिकै त अजङ्गको सर्प छ ।’
सन्तले ‘त्यसरी आत्तिन पर्दैन बाबु’ भनेर भने । उनले पुनः निर्देशन दिँदै भने— ‘जाऊ, सर्प भए पनि आत्तिनुपर्दैन । ‘ॐ नमः शिवाय’ भन्ने यो मन्त्र जप्दै जाऊ, तिमी नपुग्दै त्यो सर्प भागिसकेको हुनेछ । चिन्ता नगर, जाऊ ।’
शिष्य ‘ॐ नमः शिवाय’ मन्त्र उच्चारण गर्दै दोस्रो पटक कोठाभित्र छि¥यो । तर, आश्चर्य सर्प त्यहीँ थियो । मन्त्रले कुनै काम गरेको उसले अनुभव गरेन । भयभीत हुँदै, हस्याङफस्याङ गर्दै ऊ फेरि गुरूनजिक आयो र भन्यो— ‘गुरूदेव, खै सर्प त गएकै छैन । जस्ताको त्यस्तै एकै ठाउँमा बसिराखेको छ ।’
‘ठीक छ, यस पटक तिमी हातमा बत्ती लिएर जाऊ । बत्तीको उज्यालो हेर्न नसकी आत्तिएर सर्प आपैmँ भागेर टाढा जानेछ’— गुरूले सम्झाउनुभयो । चेलो हातमा बलिरहेको बत्ती लिएर तेस्रो पटक कोठाभित्र छि¥यो । जसै उसले बत्ती लिएर सर्प भएको ठाउँमा गयो, त्यहाँ त उसले सर्पका ठाउँमा एउटा डोरी देख्यो । सर्पको आकारमा बटारिएर बसेको डोरीलाई पो उसले अहिलेसम्म सर्प मानिरहेको रहेछ । भ्रमवश, उसले डोरीलाई सर्प मानिरहेको रहेछ ।
ऊ फर्कियो र गुरूलाई सर्पका ठाउँमा डोरी रहेको कुरा बतायो । आफ्ना चेलाको प्रतिक्रियाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै गुरूले गम्भीरताका साथ सम्झाउनुभयो— ‘बाबु, यो समग्र संसार नै यस्तै भ्रमहरुको सञ्जाल हो । सत्य र बोधको उज्यालोमा बाहेक हामी अरु कुनै पनि तरिकाले भ्रमको सञ्जालबाट उम्कन सक्दैनौँ । ज्ञानको दीपक बालेर मात्र हामी सत्य र असत्यको निरुपण गर्न सक्दछौँ । त्यसैले, सधैँ ज्ञानको उज्यालो लिएर अज्ञानको भ्रमबाट मुक्त हुने प्रयास गर्नू ।’
शिष्य भ्रमबाट बोधको यात्रा गर्नका लागि ज्ञानको दीपक अनिवार्य हुँदोरहेछ भन्ने सत्यबोध गरी तदनुसार जीवन रुपान्तरणको प्रयत्न गर्ने सङ्कल्प ग¥यो ।
हामी थुप्रैथुप्रै भ्रमहरुका बीचमा बाँचिरहेका छौँ । ज्ञानको अभावमा हाम्रा अगाडि सर्प डोरी र डोरी सर्प भएर देखा पर्ने गर्दछन् । जसै, ज्ञानका बत्तीहरु बल्न थाल्छन्, हामीले सर्प देखेका डोरीहरुको भयबाट पनि हामी क्रमशः मुक्त हुँदै जान्छौँ । हाम्रो बन्धन र मुक्ति हामीभित्रको ज्ञानको प्रकाशमा निर्धारित हुने गर्दछ ।
अज्ञान नै सम्पूर्ण दुःख र तनावको एक मात्र कारण हो । यही अज्ञानमा नै हामीले गर्न नहुने थुप्रै कुराहरु गरिरहेका हुन्छौँ, गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरु छुटाइरहेका हुन्छौँ । हामीलाई अप्रिय पनि प्र्रिय लाग्दछन्, प्रिय पनि अप्रिय लाग्दछन् । कुरुप विरुप देखिन्छन्, विरुप कुरुप देखिन्छन् । निर्णय क्षमता कमजोर भएर जान्छ । सत्य र असत्यको भेद गर्न नसक्दा कयौँ अपराधका भागीदार बनिरहेका पनि हुन्छौँ ।
अँध्यारोको यात्रा कहिल्यै सुरक्षित र सन्देहमुक्त हुँदैन । गन्तव्य कहाँ हो, थाहा हुँदैन । हिँड्नुपर्ने बाटो नहिँडेर अन्तैअन्तै हिँडिरहने सम्भावना अधिक हुन्छ । अगाडि खाडल हुन सक्छ, भीर र पहराहरु हुन सक्छन् । अजङ्गका जीवजनावरका शिकार हुन पनि सकिन्छ । म ठीक बाटोमा छु कि बेठीक बाटोमा भन्ने सन्देहले कहिल्यै छोड्दैन ।
अँध्यारोले सबै गतिहरुलाई अवरूद्ध गरिदिन्छ । दिनभर जताततै दौडधूप गरिरहेका मानिसहरु पनि रात परेपछि विश्राम गर्दछन्, निदाउँछन् । बाहिर बाटोभरि हिँडिरहेका सबै भित्र पस्दछन्, किनकि रातमा गरिएको यात्रा जोखिमपूर्ण हुन्छ । यदि रातमा कुनै काम गरिनै हालियो भने पनि बत्ती नबालीकन सम्भव छैन, उज्यालो नबनाइकन सम्भव छैन ।
जब सूर्योदय हुन्छ– सुतेका मानिस, पशुप्राणी सबै जाग्दछन् र आ–आफ्ना गन्तव्यतिर लाग्दछन् । उज्यालो भएपछि नै हामी घरबाट बाहिर निस्कन्छौँ र कर्तव्यको यात्रा आरम्भ गर्दछौँ । उज्यालोमा नै हामीले हरेकलाई चिन्न, बुझ्न र जान्न सक्दछौँ । उज्यालोमा नै निर्णय गर्न सकिन्छ, कुनै पनि विषयको यकिन गर्न सकिन्छ, निश्चित गर्न सकिन्छ ।
अँध्यारोमा हामीले केवल अनुमान गर्न सक्दछौँ । हामीले अँध्यारोमा गरेको अनुमान मिल्न पनि सक्छ, नमिल्न पनि सक्छ । कतै मिलिहाल्यो भने पनि त्यो केवल संयोग मात्र भइदिन्छ । अँध्यारो त्यसैले अनिर्णय, अनिश्चय, अनुमान र अकर्मण्यताको समय हो ।
हामीबाहिरको अँध्यारो त बत्ती बालेपछि हराइहाल्छ, तर भित्रको अँध्यारो कसरी हटाउने होला ? यो अहम् प्रश्न हो । रोग, भोग, शोक, अभाव, चिन्ता, भय र अहङ्कारजस्ता दुर्गुणहरु छन् । प्रेम, करुणा, दया, शान्ति, अहिंसाजस्ता सद्गुणहरु पनि हामीभित्र खचाखच भरिएर रहेका छन् । तर, विवेकको दियालो नबालीकन हामी दुर्गुण र सद्गुणमा फरक छुट्याउन सक्दैनौँ । यसरी फरक छुट्याउन नसक्दा नै हाम्रा लागि सद्गुणहरु दुर्गुण भइरहेका छन् र दुर्गुणहरु सद्गुण भइरहेका छन् ।
जोभित्र विवेकको दीपक प्रज्ज्वलित हुन्छ, उसको जीवन पनि सुन्दर, सभ्य र भव्य हुन्छ । विवेकको उज्यालोमा जब व्यक्तिले ठीक र बेठीकको पहिचान गर्न सक्छ, त्यसपछि उसले ठीकलाई अपनाउन थाल्दछ र बल्ल जीवन समुन्नत हुन्छ । हामीले थुर्पै खान नहुने कुरा खाइरहेका छौँ, बोल्न नहुने शब्द बोलिरहेका छौँ, गर्न नहुने काम गरिरहेका छौँ । हामीले यसो गर्नुका पछाडि हामीभित्र ज्ञानको अभाव हुन हो, विवेकको दियालो नहुनु हो । ज्ञानको उज्यालोबिना अज्ञानको अँध्यारो कहिल्यै हट्न सक्दैन ।
दीपावली त्यसैले, ज्ञानको पर्व हो । अँध्यारोले डम्म औँसीजस्ता रातहरु पनि बत्ती बालेपछि दिनमा बदलिन्छन् । सबैतिर बत्ती बल्दा लाग्दछ, उज्यालोका लागि दिनको प्रतीक्षा गर्नुपर्दैन । दीपावलीका समयमा बालिएका बत्तीहरुका कारण मानिस दिन र रातमा फरक छुट्याउन सक्दैन । उसलाई रात नै दिनजस्तो लाग्दछ र दिन नै रातजस्तो लाग्दछ । जब ज्ञानका अनेक दीपहरुले मन उज्यालिन्छ, त्यसपछि हामीलाई दिन र रात उस्तै लाग्न थाल्दछन् । दिन र रातको विभेद पनि मेटिएर जान्छ । हरेक रातहरु दिनमा बदलिन्छन् । व्यक्ति सदा प्रसन्न रहन्छ ।
तिहारका समयमा जताततै बत्ती बालेर हामीले घर, आँगन र गल्लीहरुसँगै मनलाई पनि उज्यालो बनाइरहेका हुन्छौँ । हामीभित्र अज्ञानको घना अँध्यारो छ, औँसीजस्तो रात छ । त्यसलाई ज्ञानका अनेक दीप प्रज्ज्वलित गरी लखेट्नुछ, टाढा भगाउनुछ । दीपावलीमा बाहिर बालिएका बत्तीहरु आन्तरिक उज्यालोका बिम्बहरु हुन्, अन्तस्करणको आनन्दका प्रतीकहरु हुन् । बाहिर बलेका बत्तीहरुले बाहिरका अप्ठ्याराहरु समाप्त पारेजस्तै हामीले पनि भित्र ज्ञानको ज्योति बालेर दुःख, दारिद्र्य, अभाव र अप्ठ्याराहरुलाई समाप्त पार्नुछ ।
बाहिर बलेका बत्तीहरुको उज्यालोले हामीभित्रको अँध्यारो हटाउन सक्दैनन् । ती त हाम्रा उत्प्रेरक मात्र हुन्, समाधान होइनन् । बाहिर बलेका दीपकहरुबाट प्रेरित भई भित्र पनि दीपावली गर्न सक्नुपर्दछ भन्नु दीपावलीको विज्ञान हो । जुन दिन हामी अन्तस्करणमा ज्ञानका अनेक दीपकहरु बाल्ने छौँ, त्यसदिन भित्र र बाहिर सबैतिर एकसाथ उज्यालो हुनेछ । बाहिर बलेका दीपकहरु त निभ्न सक्छन्, तर हामीले स्वयम्भित्र बालेका ज्ञानका असङ्ख्य दीप कहिल्यै निभ्नेवाला छैनन् । ती त अखण्ड बलिरहने छन्, र हामीबाट कहिल्यै नफर्कने गरी अँध्यारोलाई बिदाइ गर्नेछन् ।
ज्ञानी र जागृत मान्छेलाई कुनै पनि दुःख, पीडा र अप्ठ्याराहरुले त्यसैले छुन नसक्ने हुन् । त्यसैले, दीपावलीमा बालेका हाम्रा बत्तीहरुको ध्यान गर्दागर्दै हामीभित्र पनि ज्ञानको उज्यालो बल्न थाल्दछ । जब अन्तस्करणमा दीपावली हुन्छ, सबै दुःखहरु सुखमा बदलिन्छन्, अशान्तिहरु शान्तिमा बदलिन्छन् र घृणाहरुले पनि प्रेमको उचाइ प्राप्त गर्दछन् ।
दीपावली हामीभित्र प्रवेश गरेर आपूmलाई हेर्ने पर्व पनि हो । बाहिर बत्ती बालेपछि जे–जे छन्, ती विषयवस्तु देखिएजस्तै भित्रको बत्ती बालेपछि पनि हामीभित्रका अनेक राम्रा–नराम्रा विषयहरु देखिन्छन् । त्यसपछि हामी नराम्रालाई छोडेर राम्राका पछि लाग्छौँ । त्यसैले, दीपावली स्वयम् दर्शनको पर्व पनि हो । हामी दिन र रातलाई अलग–अलग गरेर विश्लेषण गर्न सिपालु छौँ । हामीले दिन र रातलाई जहिलेसम्म अलग बनाइरहने छौँ, तबसम्म हामीभित्र ज्ञानको आलोक पैदा भएको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । अन्तस्करणभित्र ज्ञानको दीपक बलेका हरुका लागि दिन र रात एउटै लाग्दछन् । हामीले दीपावली गर्नुको अर्थ दुःख र सुखको विभेद मेट्नु हो । ज्ञानको उच्चतम अवस्थामा पुगेका मनीषिका लागि दुःख र सुख, प्राप्ति र अप्राप्ति, भाव र अभाव अनि दिन र रात उस्तै लाग्दछन्, फरक होइन । त्यसैले, दीपावली दिन र रातलाई टुक््रयाउने पर्व होइन, जोड्ने पर्व हो । दिन र रातलाई ज्ञानको उज्यालोभित्र एकैसाथ समेट्ने पर्व हो ।
त्यसैले आउनुस्, गरौँ धुमधामका साथ दीपावली । मनभित्र र बाहिर चारैतिर प्रशस्त बत्ती बालेर उज्यालो बनाई भित्र पनि त्यसरी नै उज्यालिने प्रयास गरौँ । भित्र अँध्यारो लिएर बाहिर उज्यालिनुको कुनै अर्थ छैन । तपाईंसँग दुःखहरु छन् भने र छन् भने अगणित गुनासाहरु, तपाईंलाई दिन पनि रातजस्तो लाग्न थाल्छ । बाहिरको झलमलमा पनि तपाईं अलमलमा पर्नुहुन्छ । आज यही त भएको छ । बाहिर अनेक बत्तीहरु बलिरहेर पनि मानिसभित्र अज्ञानको अँध्यारो डम्म छ । यसपटक भने साँच्चै बाहिरजस्तै भित्र पनि उज्यालिने प्रयत्न गरौँ । दीपावलीको विज्ञानलाई आत्मसात् गर्ने प्रयत्न गरौँ ।